Fitsarana heloka bevava
Heloka bevava ny fitsarana, araka ny lalàna italiana, izany no nifandimby ny fihetsika, natomboky ny italiana manampahefana ara-dalàna, izay mitondra avy ny fampidirana ny heloka bevava ny fanononana teny farany mba hanao ny fitsarana. Izany dia mamaritra ny heloka bevava dingana ireo no mamarana ny fitsarana heloka bevava izay nanomboka toy ny vokatry ny fanononana teny ny didim-panjakana ny fiampangana amin’ny savaranonando nandre, na, ao amin’ny fitsarana manokana fa omit ity fihainoana ity (avy hatrany ny fanehoan-kevitra, maneho fitsarana sy ny fizotry ny didim-panjakana), taorian’ny fangatahana nataon’ny lehiben’ny fampanoavana, teo amin ny fisehoan-javatra ny fepetra voalaza amin’ny alalan’ny lalàna.
Ny mpampanoa lalàna, raha toa ka lasa mahafantatra ny manan-danja ny zava-misy, amin’ny ny fangatahana ny antoko (ohatra: ny fitarainana, ny fitarainana amin’ny ampahany ny tsy miankina na ny birao nandritra ny mazava ho azy fa ny mpitsara), dia ny manome noho ny fisoratana anarana ny heloka bevava. Avy eo dia misokatra ny sehatra ho an’ny fanadihadiana mialoha izay mikendry ny fanapahan-kevitra momba ny fanatanjahan-tena momba ny heloka bevava ny asa, izay tsy maintsy omena mariho ny antoko liana. Ny filazana dia ihany koa ny ahitana ny marina, ao anatin’ny roapolo andro manomboka ny fampahafantarana, ny fangatahana ny fanadihadiana lalina, mba manaiky ny fanambarana, dia hodinihina araka ny mpampanoa lalàna raha toa ka ny fangatahana ny fanadihadiana vaovao dia ho nanaiky, ireo dia ho entina avy ao anatin’ny ambony indrindra fe-potoana andro, anisan’izany ny fe-potoana fahasoavana. Na izany aza, satria ny fehezan-dalàna heloka bevava ny fomba tsy manome noho ny adidy ho an’ny vahoaka ministrerò, ianao dia hanana hatrany ny fakàna am-bavany ny olona ahiahiana mazava ho azy fa ny fanadihadiana savaranonando, ny fepetra art.
bis ao amin’ny fehezan-dalàna momba ny paika ady heloka bevava (mariho ny miahiahy ny famaranana ny fanadihadiana mialoha) dia manome antoka fa ny mahomby ny fampiasana ny zo fiarovana
Na ahoana na ahoana, ny fitalahoan’ny, ny vokatra ny antontan-taratasy sy ny fanontaniana izay ho tafiditra ao amin’ny antontan-taratasy ny mpampanoa lalàna, nanaraka ny zava-kanto. bis, ho fizahana nataon’ny mpitsara ho an’ny mialoha ny fanadihadiana ary no zava-dehibe fa ny tanjon ny fanapahan-kevitra ny mahatonga ny raharaha ny voampanga nangataka ny fitsarana ho fanafohezana. Mandritra ny famaranana mialoha ny famotorana ny mpampanoa lalàna, izay misy ny singa ny miroso, dia manao ny fangatahana ny fanenjehana azy, dia hampita ny olona voakasika nanasa azy mba mety hanendry ny mpisolovava ny matoky, amin’ny mametraka ny zava-misy, ny fepetra izay heverina ho nandika, ny toerana sy ny daty ny fanitsakitsahana ary koa ny antontan-taratasy mifandraika amin’ny famotorana izay ho napetraka tao amin’ny sekretarian’ny ny vahoaka ny asa fanompoany. Amin’ity tranga ity, ny vahoaka asa fanompoana mitaky, ny amin’ny fomba izay hanova ny asan ny fombam-pivavahana, noho izany, na avy amin’ny olona ahiana voafidy noho ny fananana fahaiza-manao ny adjudicating tena voasarika avy amin’ny anaram-boninahitra ny fandikàn-dalàna, izay nanolotra ny momba izay no taratry ny fametrahana ny heloka bevava dingana. Zava-dehibe ny milaza fa izany dia tsy avy amin’ny dingana ity ny miahiahy ny maka ny andraikitry ny voampanga, ary avy eo afa-tsy io dingana io, ny dingana dia heverina ho tehezan ny loading ny toy izany koa. Farany, raha toa izy ireo dia tsy hita mahasoa ho an’ny zavatra toy izany dingana izany, fa apetraka ao amin’ny fitehirizana amin’ny alalan’ny fangatahana manokana: indrindra ny mitsangana avy eo ny fangatahana fitehirizana ny didim-panjakana fitehirizana: ny voalohany dia ilaina ny ny vahoaka ny minisitera, raha ny faharoa dia navoakan’ny GIP
Pirenena ny fikambanana ara-Tsosialy ny Trano fonenana - Ny Repoblika dia mampiroborobo ny fahazoana ny olona ny tahiry amin'ny tompony ny fonenana (art. efa-polo-fito ny lalàm-Panorenana)